Yona 2 ASCB - Jona 2 HTB
1Yona firii apataa no yam bɔɔ Awurade ne Onyankopɔn mpaeɛ sɛ. 2Ɔkaa sɛ,
“Mʼahohia mu mefrɛɛ Awurade,
na ɔgyee me so.
Mefiri adamena ase tɔnn srɛɛ mmoa
na wotiee me sufrɛ.
3Wotoo me twenee ebunu mu
wɔ ɛpo ase tɔnn,
na ɔhweam twaa me ho hyiaeɛ;
4Na mekaa sɛ, ‘Wɔapam me afiri wʼanim;
5Nsuo a abu afa me so no bɔɔ me hu,
ebunu no twaa me ho hyiaeɛ;
ɛpo mu wira kyekyeree me tiri ho.
6Memem kɔɔ mmepɔ no ase pɛɛ;
Nanso wogyee me nkwa firii amena mu,
Ao Awurade, me Onyankopɔn.
7“Ɛberɛ a me nkwa resene akɔ no,
na me mpaeɛbɔ foro baa wo nkyɛn,
8“Wɔn a wɔde wɔn ho bata ahoni huhuo ho no
hwere adom a anka ɛyɛ wɔn dea.
9Nanso me, mede ayɛyie nnwom
bɛbɔ afɔdeɛ ama wo.
Deɛ mahyɛ ho bɔ no, mɛyɛ.
Nkwagyeɛ firi Awurade.”
ASCB : Yona 2